Ukwenza Imvo Zokuthandana nolwalamano
ukubuyekezwa: Jan. 05 2018 | 2 min ukufunda
Ukuthandana yenye yezo zinto ukuba phantse wonke umntu esondela yingcamango ubuncinane ezinye ukunkwantya ngexesha elinye okanye elinye. Emveni kwakho konke, ekujonganeni ubudlelwane zinzima kwaye ngamanye amaxesha ayikhankanyi ukuba bana phandle ukuba yintoni na omnye umntu ufuna ngokwenene ngenxa. Abantu bazifumane nzima kulwalamano badla ngokutsho ukuba uza ngemihla ngaphezulu uya kubanika iinketho ezininzi, kuphela ukuzibhaqa nzima nemiba ezinzima ngenxa yemigudu zanda yabo.
Kukho eziliqela izizathu ukuba oku kuyenzeka, ukusuka ukungakwazi ukunxibelelana kakuhle into yokuba abantu ngamanye amaxesha ufuna izinto ezahlukileyo ngokupheleleyo kubudlelwane babo. Iindaba ezimnandi kukuba oku akuthethi ukuba kufuneka ukuba kunzima.
Enye yeendlela ukuba uloyiko, nokuqhiphula ngaphandle ukuthandana ukugcina yonke bechulamancile ekuqalekeni. Akukho mfuneko ukuba soyike okanye eyoyikekayo malunga umhla wokuqala kuba kanye ukuba, ngomhla wokuqala. Akukho mfuneko yokuba kukho umhla wesibini ukuba izinto azihambi kakuhle. Umhla wokuqala kufuneka ondele njengethuba ukuba incoko kwaye banyaniseke kunye nomnye umntu ukuze ufumanise okungakumbi loo mntu ize, kuvumela ukuba umntu ukufumana ngaphandle okuninzi malunga nawe.
Nto kuphela abantu babonakala ugxininisa ngakumbi kunokuya ngomhla wokuqala kukufumana ukuba umhla wokuqala. Abanye abantu bacinga ukuba sebubini konke ukufumana umhla emva komhla. Abanye bakufumanisa kunzima kakhulu. Kwiimeko ezifana nezi kusenokuba luncedo ukuba basebenzise website ukuthandana okanye inxaxheba kwiziganeko ekuzuzeni ukunceda abantu bafumane umhla. Abanye abantu ba nga bakholisekile imihla esele elisekiweyo ncakasana kwaye sifumane iindlela eyodwa ukuqinisekisa ukuba baya kufumana umhla ngendlela encamisayo zemveli. Yikholwe okanye hayi, enye yeendawo inkulu ukuba wacela ngomhla mhla epakini inja.
Kukho into ethile malunga bendihlala inja ukuba waphula umkhenkce. Kulula ukuthetha nomntu ngesilo kunokuba ukuthetha ezinye izinto. Inika ithuba lokuthetha into loo mntu xa mhlawumbi kwakungayi wathi nantoni na konke konke ukuba wa kwenye imeko. Xa zonke izinto zithathelwa ingqalelo, Akumangalisi ukuba epakini inja yindawo eqhelekileyo ukuba nditsaleleka kumntu. Inika into ukuthetha kwaye uyazi ukuba ebuzwa phezu umhla umntu ukuba unalo ngesilo khona ukuba ababini kuni sele ubuncinane enye into efanayo.
Ingongoma kukuba isimbo yakho ukuthandana ekugqibeleni iya ebotshelelwe zobuntu bakho kunye nendlela ugqiba yokusingatha izinto ngokubanzi. Oko kuya kukunceda ukuba isigqibo ukufumana ukuba umhla wokuqala. Xa ufika khona, eyona nto ibalulekileyo ukuba ukukhumbula ukuba ukugcina ukukhanya ncoko vumela ukuba nawe naphi Kungakuthatha ukuze. Ngenxa kunokuba nje umntu okufaneleyo ekupheleni.